Casting အစိတ်အပိုင်းများ, ပျောက်ဆုံးသွားသောဖယောင်းရုပ် Casting, silica Sol Casting, သံကာစ် - Tongda
silica Sol ကာစ်
Pneumatic & လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများ
(စပွငျသစျထဲတွင် "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသတ္တုများပုံသွန်း", "တိကျသတ္တုများပုံသွန်း" ဟုခေါ်, ဒါမှမဟုတ် cire perdue) ချ. -ဖယောင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
(LFC) ချ. ဆုံးရှုံးခဲ့ရ-ရေမြှုပ်ရေမြှုပ် မှလွဲ. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသတ္တုများပုံသွန်းဆင်တူကြောင်းအငွေ့-ပုံစံ ချ. လုပ်ငန်းစဉ်ပုံစံအစားဖယောင်းအသုံးပြုသည်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Silicon တို့သို့ Cast
silica sol သတ္တုများပုံသွန်းသံမဏိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Cast များအတွက်ပုံမှန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
(စနှိပ်အဖြစ်လူသိများ) နေမှုကိုချေဖျက်ဘယ်မှာ tool ကိုတစ်ဦးနေမှုကိုချေဖျက်စာနယ်ဇင်းသို့အလွတ်သို့မဟုတ်ကွိုင်ဖြစ်စေ form မှာပြားချပ်ချပ်စာရွက်သတ္တုအားမရ၏လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်ပုံစံများကိုသေဆုံး
Forge ဒေသတွင်း compression တပ်ဖွဲ့များသုံးပြီးသတ္တုပုံသဏ္ဍာန်ပတျသကျတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Tongda ပစ္စည်းမျိုးစုံအပေါ်သုတသေနပွုနှင့်လည်းဖောက်သည် '' OEM ထုတ်ကုန်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အင်ဂျင်နီယာများ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်းကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ အရည်အသွေးသေချာစေရန်, Tongda X-Ray စမ်းသပ်သူ, CMM, Spectrum ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစာရွက်စာတမ်း, Metallographic စာမေးပွဲစာရွက်စာတမ်း, သံလိုက်မှုန် lnspector မာစမ်းသပ်သူ, သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်ခြင်း Machine.and က Universal ခွန်အားစမ်းသပ်သူနဲ့တူပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်တဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်။
Tongda အိမ်မှာအကောင်းတစ်ဦးဂုဏ်သတင်းရရှိသည်နှင့်ပြည်ပမှာယင်း၏ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေး, On-အချိန်ပေးပို့နှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူထားပြီး, Tongda လည်းတရုတ်တစ်ဦးဦးဆောင်သတ္တုများပုံသွန်း manufactuer ဖြစ်လာမှာပါရည်ရွယ်သည်။
E-mail ကို: whw@east-td.com